Shaqaalahayaga khibrada leh oo wax garad ah xirfadlayaasha ah waxaa ka mid ah macalimiinta rusqada ama shatiga macalimiinta leh , shaqaalaha bulshada , kalkaaliyayaasha , shaqaalaha taageerada, barayaal iskaa wax u qabso ah iyo kuwa kale. Waxay mudnaanteenu tahay in aan idin taageerno si aad u gaartaan hadafkiina. Haddii aad tahay ugu yaraan 16 sano jir oo hada aadan u diiwaangashaneyn barnaamijka waxbarashada Iskuulada ee joogtada ah , fadlan naga soo wac lambarka ah: 320-529-6500 , ext . 6211 , ama e- mail abe@isd742.org .
Dhammaan dadka cusub ee soo galootiga ku ah Maraykanka, iyadoo aan loo eeginin heerka awoodda Ingiriisi, waxaa lagu soo dhaweynayaa in ay isdiiwaangaliyaan. Ku biir ama kamid noqo 800-1000 dadka waaweyn ee ka qayb qaata fasallada ESL sannad kasta . Booqo xafiiska ama nagala soo xidhiidh lambarka ah: 320-529-6500, ext. 6211 ama abe@isd742.org wixii macluumaad dheeraad ah.
Qeybahaan ayaa waxay ku saleysan yihiin bartilmaameedyada aqoonta kambiyuutarka asaasiga ah. Dadka waa weyn waxaa a woodooda xirfdeed lagu cadayn karaa mid ama ka badan qeybahaan gooniga ah iyada oo loo marayo baaritaan uu maareeynayo kormeerka Baraha dadka waa weyn ee asaasiga. Helitaanka shahaado ayaa muujinaya shaqa bixiyayaasha in codsaduhu ogyahay ama garanayo xirfadaha aasaasiga ah ee kambiyuutarka, sidoo kale kor loogu qaado kalsoonida oo ka mid ah shaqo – raadiska. Si aad u ogaatid macluumaad dheeraad ah booqo bogga interneedka www.griver.org/events ama kala xiriir xubin ka mid ah shaqaalaha maktabadda lambarka ah: 320-650-2500 ext . 6211
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fursadahaan, fadlan soo wac xafiiskeena oo aad ka heli kartid lambark ah: (320) 529-6500 , x6211 , ama email noogu soo dir abe@isd742.org.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka akhriska- qoraalka qoyska nagalsoo xidhiih lambarka ah: 320-529-6500 , ext . 6211 , ama noogusoo dir ciwaankeena ah: abe@isd742.org.
Wac maanta si aad u bilowdo! Lambarka ah: 320-529-6500, ext. 6211, ama Ciwaankeena ah: abe@isd742.org.
Si aad wax badan oo ku saabsan barnaamijka xoojinta xirfadaha u baratid wac lambarka ah: 320-529-6500 ext . 6211 , ama Ciwaankeena ah: abe@isd742.org.
Wixii macluumaad dheeraad ah wac lambarka ah: 320-529-6500 , ext . 6211 , ama noogalasoo xidhiidh Ciwaanka ah: abe@isd742.org.